Izikolo ezili-10 zeZonyango eziBalaseleyo eFlorida ngeNtlawulo 2022
January 22, 2022 Eze uThadayo
Uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida luqulunqwe lwaxoxwa kule posi yebhlog ukulungiselela ukwamkelwa kwabemi baseFlorida kunye nabafundi bamanye amazwe abafuna ukufumana imfundo kwicandelo lezonyango.
Iyeza lelo licandelo eliye lanceda abantu ukuba baqonde iimfihlakalo ezijikeleze ubomi kwaye, ewe, liphendule imibuzo emininzi kwaye lisombulule imiba emininzi esongela ubomi. Ukubaluleka kweyeza akunakuxoxwa ngokwaneleyo kuba akukho sixa samagama siya kwanela.
Yintsimi enkulu kakhulu kwaye ngalinye lamasebe alo libalulekile kwaye lisombulula izigidi zemicimbi, lenza ukufumanisa okungakumbi kunye nezinto ezintsha ukunceda abantu, kwaye liphendula imibuzo enzima nangakumbi enxulumene nobomi. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni kunzima amayeza kwaye kuphela kweyona nto ibalaseleyo ekufundeni kuba ijongana neengxaki ezininzi ezinzima.
Ukuze ube ngugqirha osebenzayo, kuya kufuneka uye kwisikolo sezonyango kwaye ufumane iphepha-mvume lakho lonyango, olo lulwazi oluqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukwazi isikolo esifanelekileyo sezonyango ukuya kuso asilo lwazi luqhelekileyo. Kubalulekile ukuba ukhethe isikolo esihambelana nendawo yezonyango ofuna ukuyenza, kunye nokwazi iimfuno kunye nayo yonke into efunekayo ukuze ungeniswe kule nkqubo yonyango.
Kukule meko ukuba esi sithuba kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida sapapashwa.
IFlorida ngurhulumente e-US ngeAtlantic kwelinye icala kunye neGulf of Mexico kwelinye kwaye unamakhulu eekhilomitha zonxweme. Isixeko esithandwayo saseMiami sikule meko intle.
Abafundi abavela kumazwe ahlukeneyo ajikeleze i-United States nakwamanye amazwe babhalise kumaziko aphezulu eFlorida aqhuba inkqubo yesidanga kuluhlu olwahlukeneyo lwamayeza, amayeza, ubunjineli, ishishini, umthetho, isayensi yekhompyuter, kunye nezinye ezininzi.
Njengomfundi wamazwe aphesheya, ukufumana isidanga kuwo nawaphi na amaziko aseMelika kuya kukuzisela izibonelelo ezininzi, ngakumbi xa ubuyela ekhaya. Yonke inkampani kwilizwe lakho kwicandelo lakho lokufunda inokufuna ukukuqesha, uya kugcinwa uhlonitshwe kakhulu ngoogxa bakho, abamelwane, kwaye wenze uthungelwano olukhulu lwabahlobo abavela kwamanye amazwe kwihlabathi liphela.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ukufunda kwindawo efana ne-United States kuyabiza. Izifundo kunye neendleko zokuphila zikwicala eliphezulu labafundi bamanye amazwe kwaye ukulandela inkqubo efana neyeza kubiza kakhulu.
Ngaphandle kokuqhubeka, masingene kwisihloko esiphambili. Unokufuna ukusebenzisa itafile yemixholo engezantsi ukuhamba ngokulula ngeposi.
1 Yintoni iSikolo sezoNyango eFlorida
2 Izikolo zonyango eFlorida Umndilili weMali yoThutho
3 Izidingo zeZikolo zezoNyango eFlorida
4 Indlela yokufaka isicelo kwiSikolo sezoNyango eFlorida njengoMfundi welinye ilizwe
5 Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eFlorida
5.1 1. I-FIU Herbert Wertheim College yezoNyango
5.2 2. ULeonard M. Miller weSikolo sezoNyango
5.3 3. IMorsani College yezoNyango
5.4 4. IYunivesithi yaseFlorida yezoNyango
5.5 5. UCharles E. Schmidt weKholeji yoNyango
5.6 6. Ikholeji yeUCF yezoNyango
5.7 7. Ikholeji yeFSU yezoNyango
5.8 8. UGqr Kiran C. Patel College weeOsteopathic Medicine
5.9 9.Ikholeji yaseLake Erie yeOsteopathic Medicine (LECOM)
5.10 10. IYunivesithi yaseFlorida College of Medicine - Jacksonville
6 Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-2 eMiami, eFlorida
7 Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-5 eFlorida
8 Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-6 eFlorida
Yintoni iSikolo sezoNyango eFlorida
Isikolo sezonyango eFlorida liziko lemfundo eliphezulu okanye icandelo leziko, eFlorida, elisekwe ukufundisa amayeza kunye nolunye uqeqesho olunxulumene nezonyango, kunye nokuwongwa ngedigri yobungcali koogqirha nakwabagqirha.
Izikolo zonyango eFlorida Umndilili weMali yoThutho
Umyinge wemali yokufunda kwizikolo zonyango eFlorida yi- $ 41,000.
Izidingo zeZikolo zezoNyango eFlorida
Ukufaka isicelo sesikolo sezonyango eFlorida, iimfuno zezi:
Umfaki-sicelo kufuneka agqibe isikolo esandulela i-med kwisayensi (i-biology, i-chemistry, i-physics, kunye nezibalo) nge-CGPA ye-3.0
Ubuncinci be-MCAT yama-500
Ukubandakanyeka okubalulekileyo kunye okunentsingiselo kwimisebenzi yezonyango
Ukubonisa ukusebenzisana kunye nezakhono zobunkokeli
Bonisa umdla kuphando
Ukuzibandakanya okugqwesileyo kwimisebenzi yangaphandle
Inkonzo eqhutywa rhoqo kuluntu
Iileta ezintathu ukuya kwezintlanu zezindululo
Indlela yokufaka isicelo kwiSikolo sezoNyango eFlorida njengoMfundi welinye ilizwe
Njengomfundi welinye ilizwe, zimbalwa izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokufaka isicelo kwiinkqubo zesikolo sezonyango eFlorida. Eyona nto ibalulekileyo ukuyazi kukuba kukho amaxabiso asezantsi kakhulu okwamkelwa kwabafundi bamanye amazwe, imali yokufunda iphakame kakhulu, kwaye akukho zifundo zifumanekayo zokukunceda.
Oku akuthethi ukuba kukuthintele ekusebenziseni, endaweni yoko kukukunika umbono wokwenyani wamathuba akho okungena kunye nokuba kuya kukubiza malini.
Nangona kunjalo, ukufaka isicelo, kuya kufuneka, okokuqala, ufumane i-visa yabafundi emva koko uthathe i-MCAT emva koko uza kuqala ukudibanisa uluhlu lwezikolo zonyango onqwenela ukungena kuzo. Kwakhona, ezinye izikolo azibamkeli abafundi bamanye amazwe, kuya kufuneka ulumkele oku. Amaziko abucala lelona thuba lakho lilungileyo kodwa abiza kakhulu kunezikolo zikarhulumente.
Jonga iwebhusayithi yesikolo sakho esiza kubakho ukuba uza kwamkela abafundi bamanye amazwe okanye hayi. Emva kokuthatha isigqibo kwiikholeji ezimbalwa, kuya kufuneka ugcwalise isicelo, esenziwe nakwiwebhusayithi yezikolo. Qinisekisa ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno ezingasentla kwaye onke amaxwebhu alungile kunye nenqaku lokuvavanywa kolwimi lwesiNgesi olufaka njengenxalenye yesicelo sakho.
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eFlorida
Ngokuthe ngqo apha ngezantsi zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida kwaye ziyaxoxwa ngakumbi ngezantsi ngezixhumanisi zazo zokukunceda ukuba ufunde ngakumbi malunga nezikolo kwaye, mhlawumbi, faka isicelo.
I-FIU Herbert Wertheim kwiKholeji yoNyango
Isikolo samayeza sikaLeonard M. Miller
IMorsani College yoNyango
IYunivesithi yaseFlorida College of Medicine
Ikholeji ye-UCF yezoNyango
Ikholeji yeFSU yezoNyango
Ikholeji yaseKiran C. Patel yeOsteopathic Medicine
ILake Erie College yeOsteopathic Medicine (LECOM)
IYunivesithi yaseFlorida College of Medicine-Jacksonville
1. I-FIU Herbert Wertheim College yezoNyango
Eyasungulwa ngo-2006 kwaye ihlala eModesto A. Maidique Campus, eMiami-Dade County, eFlorida, iKholeji yaseHerbert Wertheim yezoNyango yinkxaso yezobugcisa kwiYunivesithi yaseFlorida International (FIU). Ikholeji ibekwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida kwaye idume ngokuvelisa uphando olukumgangatho wehlabathi kunye noqeqesho kukhathalelo lokuqala.
Ukongeza, kubekwa kwinqanaba le-3rd njengesona sikolo sezonyango ezahlukileyo kwihlabathi yi-US News kunye neNgxelo yeHlabathi njengoko i-43% yabafundi bayo ingamaqela amelweyo. KuHerbert, unokulandela isidanga sobugqirha kwi-Medicine, Ph.D. kwiiNzululwazi zeBiomedical, ii-Master's kwiZifundo zoNcediso loMzimba, iSatifikethi seSidanga seMolekyuli kunye neeNzululwazi zeBiomedical, kunye neNkqubo yaBafundi yezoNyango yaBafundi yeHlabathi.
Imali yokufunda yabafundi bendawo yi- $ 27,772 ngonyaka kwaye isifundo sasekhaya yi- $ 57,772 ngonyaka.
2. ULeonard M. Miller weSikolo sezoNyango
Isikolo sezeMpilo sikaLeonard M. Miller sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseMiami kunye nesona sikolo sidala sezonyango eFlorida, esasekwa ngo-1952. Liziko labucala lemfundo enomsila elineziko lezonyango elinikezela ngophando olusemgangathweni kwaye linerekhodi eqinisekisiweyo ngokubanzi kunye nefuthe Uluntu kunye nokuzibandakanya kwehlabathi.
Isikolo iMiller of Medicine sinikezelwe ekuxhobiseni abafundi ukuba batshintshe ubomi kwaye babonelele ngononophelo lwempilo kubantu abangafumanekanga eMzantsi Florida. Kukho iinkqubo ezintsha nezidibeneyo kwesi sikolo esenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zomfundi ngamnye. Amasebe afaka; Iiklinikhi, iSayensi eSisiseko, amaZiko kunye namaZiko, kunye neeOfisi zoLawulo.
Imali yokufunda kwiDyunivesithi yaseMiami Miller yeSikolo sezoNyango yi- $ 38,504.
3. IMorsani College yezoNyango
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseMzantsi Florida, yikholeji kawonkewonke yamayeza esekwe kwi-1971 emantla eTampa, eFlorida. Sisinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida ezibonelela ngenkqubo yesayensi kunye neenkqubo zophando lweklinikhi ngelixa befuna iindlela zokuvala ezi zimbini. Ikholeji likhaya lelinye lamaziko amakhulu e-Alzheimer akhululekileyo kwihlabathi kunye neZiko leSwekile le-USF elaziwa kwilizwe liphela.
Ikholeji inamasebe angaphezulu kwama-20 emfundo aquka amayeza oSapho, ubuNjineli bezoNyango, iMedical Medicine, iPediatrics, i-Urology, i-Surgery, i-Neurology kunye ne-Oncologic Sciences. La masebe abonelela ngeenkqubo zesidanga esikhokelela kwi-MD, iiMasters, kunye nePh.D., Kunye nokuhlala kunye noqeqesho lobudlelane.
Isifundo sabafundi basekhaya yi- $ 31,280.4 kwaye izifundo zamanye amazwe yi- $ 54,739.2
4. IYunivesithi yaseFlorida yezoNyango
Esi sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida kunye nesikolo sezonyango kwiDyunivesithi yaseFlorida enika izidanga kwiGqirha lezeMithi (MD), uGqirha wezoNyango-uGqirha weFilosofi (MD-Ph.D.), Kunye neziGanga zoNcedisi zoGqirha ( PA.) Kubafundi abaphumeleleyo. Ikholeji likhaya lamawaka eefakhalthi, abafundi, kunye nabasebenzi abazibophelele ekukhuthazeni impilo kunye nentlalontle yabantu kwihlabathi liphela.
Ukusukela oko yasekwayo kwi-1960, ngaphezulu kwamagqirha e-5,000 aphumelele kwiKholeji yoNyango ye-UF. Ezinye iinkqubo zesidanga sokufunda zifundiswa kubandakanya isayensi yezonyango, ubunjineli bendalo, izifundo zokuncedisa kugqirha, kunye nesayensi yezinto eziphilayo. Isifundo sasekhaya yi- $ 25,000 kunye ne- $ 53,000 yokufunda ekhaya.
5. UCharles E. Schmidt weKholeji yoNyango
IYunivesithi yaseFlorida Atlantic igcina isikolo sezonyango esaziwa ngokuba yiCharles E. Schmidt College of Medicine ebonelela nge-MD, BS / MD, MD / MBA, MD / MHA, MD / Ph.D., Kunye ne-Ph.D. izidanga zabafundi abagqibe inkqubo yezonyango. Iinkqubo zokuhlala kwakhona kunye ne-post-baccalaureate yonyango nazo ziyafumaneka ekholejini.
Sisinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida kwaye yasekwa ngonyaka we-2011 eBoca Raton, eFlorida. Imali yokufunda yeSchmidt College of Medicine iyi- $ 31,634 kubahlali baseFlorida kunye ne- $ 67,776 yabanye.
6. Ikholeji yeUCF yezoNyango
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseCentral Florida kunye nesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida, esekwe kwi2006 eOrlando, eFlorida, eUnited States. Ikholeji ineendawo ezininzi zophando lwezonyango kwaye inxulumene nezibhedlele kunye namanye amaziko onyango ajikeleze naseFlorida apho abafundi bezonyango baqeqeshiwe kwaye baxhotyiswe ngezakhono zokufumana amava.
Ikholeji ibonelela nge-baccalaureate, isidanga, kunye needigri zobungcali kwiinkqubo ezintlanu ezahlukeneyo; Iisayensi zeBiomedical, Biomedical Neuroscience, Biotechnology, iSayensi yeLebhu yeLebhu, amayeza, kunye neMolekyuli yeBiology kunye neMicrobiology. Isikolo sezonyango sinikezela ngeedigri ezidibeneyo kubandakanya iMD / Ph.D., MD / MBA, kunye nesidanga se-MD / MS kubuk 'iindwendwe.
Ngaphaya koko, ikholeji igcina iSikolo saseBurnett seSayensi yezoBugcisa enikezela ukuya kuthi ga kwi-3,000 yezifundo eziphambili. Isifundo sasekhaya yi- $ 25,000 kwaye izifundo zasekhaya yi- $ 53,000
7. Ikholeji yeFSU yezoNyango
Ikholeji yeFSU yezoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseFlorida State, kwaye ikholeji yenye yezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida, esekwe kwi200 kwaye ikwiTallahassee. Inqanaba lokuqala kwezona zikolo zilishumi ziphezulu zonyango ezinamanqanaba okwamkelwa asezantsi yiNdaba yase-US kunye neNgxelo yeHlabathi. Ikholeji inamasebe amahlanu;
IiNzululwazi zokuZiphatha kunye noNyango lwezeNtlalo
Amayeza oSapho kunye neMpilo yasemaPhandleni kunye
Iinkqubo zokuhlala kwakhona, iinkqubo zobudlelane, kunye noncedo lokuncedisa kugqirha zikwanikezelwa kwiKholeji yeFSU yezoNyango. Iinkqubo zesidanga esibonelelweyo zi-MD, uMncedisi kaGqirha, i-Ph.D., I-MS (iNkqubo yeBridge), kunye ne-BS (Inkqubo ye-IMS). Isifundo sabafundi bendawo yi- $ 21,293.2 kwaye izifundo zasekhaya yi- $ 55,844.4
8. UGqr Kiran C. Patel College weeOsteopathic Medicine
Eyilwe kwi-1981 kwaye ibekwe eDavie, eFlorida, uGqirha Kiran C. Patel weKholeji yeOsteopathic Medicine sisikolo sezonyango saseNova Southeastern University, isikolo sabucala. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida kwaye sinika ugqirha wesidanga seOsteopathic Medicine esisidanga esinye sonyango esisibonelelayo.
Ikholeji ibonelela ngeenkqubo ezininzi zesidanga sokuqala, zenkosi, kunye nezatifikethi, kubandakanya iMasters kwiMpilo yoLuntu, isondlo, unyango lweZibini kunye nezoSapho, kunye ne-Master of Science Degrees. Ikholeji ibonelela ngemfundo ejolise kubafundi kubafundi bezonyango lwe-osteopathic, abaqeqeshwayo kwizidanga zokuqala, oogqirha, kunye nabanye abaqeqeshiweyo.
Imali yokufunda $ 32,110.
9.Ikholeji yaseLake Erie yeOsteopathic Medicine (LECOM)
Isungulwe kwi-1992 kwaye yabekwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida, i-LECOM sisikolo sabucala esiphumeleleyo samayeza, ugqirha wamazinyo, kunye nekhemesti enikezela izidanga kwi-DO, i-DMD, kunye neFarmD ngokwahlukeneyo. Iidigri ze-Master kuLawulo lweeNkonzo zezeMpilo, iiSayensi zeBiomedical, kunye neMfundo yezoNyango nazo ziyaqhutywa kwaye yenye yeekholeji ezimbalwa kweli lizwe ezibonelela ngenkqubo ekhawulezileyo yeminyaka emithathu yekhemesti kunye nenkqubo yemfundo emgama.
I-LECOM ijolise ekulungiseleleni abafundi ukuba babe ngoogqirha be-osteopathic, oosokhemesti, kunye noogqirha bamazinyo ngokusebenzisa iinkqubo zokugqwesa kwimfundo, uphando, ukhathalelo lweklinikhi, kunye nenkonzo yoluntu ukuphucula umgangatho wobomi ngokuphucula impilo yabo bonke. Imali yokufunda kwi-LECOM yi- $ 28,100.
10. IYunivesithi yaseFlorida College of Medicine - Jacksonville
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida yiDyunivesithi yaseFlorida yezoNyango- iJacksonville, esekwe kwi1985, yeyona inkulu kula maziko mathathu eeDyunivesithi yaseFlorida. Ikholeji inamasebe esayensi yezonyango ayi-16 anikezela ngeenkqubo zonyango ezamkelweyo ezingama-39 kunye neenkqubo ezili-14 ezingekho mgangathweni.
Umndilili wezifundo kwiYunivesithi yaseFlorida College of Medicine -IJacksonville yabahlali baseFlorida yi- $ 36,657 kunye ne- $ 65,898 yabanye.
Ezi zezona zikolo zi-10 zezona zonyango zibalaseleyo eFlorida ukuze ukhethe ezona zikulungeleyo kwaye uqalise ukuthumela izicelo zakho kwangoko.
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-2 eMiami, eFlorida
Ezona zikolo zibalaseleyo eMiami, eFlorida zezi;
IYunivesithi yaseMiami Leonard M. Miller yeSikolo sezoNyango
IYunivesithi yaseFlorida uHerbert Wertheim wekholeji yezonyango
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-5 eFlorida
Kukho izikolo ezihlanu ezigqibeleleyo zesidanga sokuqala okanye zezona zenziwe kwangaphambili eFlorida, kunjalo;
IYunivesithi yeCentral Florida
EFlorida State University
IYunivesithi yeSouth Florida
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ezi-6 eFlorida
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFlorida zezi;
Ngaba iFlorida ilungile kwisikolo sezonyango?
IFlorida inezinye zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango kunye neenkqubo zeli lizwe kwaye yindawo entle yokufumana abafundi bezonyango.
Yeyiphi ikholeji enenkqubo efanelekileyo yezonyango eFlorida?
Ikholeji eneyona nkqubo yezonyango eFlorida yiYunivesithi yaseMiami
Sisiphi esona sikolo silula sezonyango ukungena eFlorida?
Esona sikolo silula sezonyango ukufumana ukwamkelwa eFlorida yiyunivesithi yaseFlorida yeAtlantic uCharles E. Schmidt College of Medicine. Kwaye kungenxa yokuba ukwamkelwa kwayo kwe-6.5% lelona liphezulu phakathi kwabanye.
Sisiphi esona sikolo kunzima ukusifumana eFlorida?
Ngobungakanani bokwamkelwa kwabafundi be-50 kuphela kunye ne-MCAT ephakathi ye-511, iYunivesithi yaseNova eseDyunivesithi uGqirha Kiran C. Patel College yeAllopathic Medicine sesona sikolo sinzima kwezonyango eFlorida ukungena kuso.
Izikolo ezigqibeleleyo zeZonyango eFloridaezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eFloridaIzikolo eziBalaseleyo zeZonyango eMiamiEzona zikolo ziGqibeleleyo zeZonyango eFloridaFlorida
Post Previous:Izikolo eziphambili ze-100 zangaphambi kokufumana imirhumo yazo yangoku
Okulandelayo Post:I-15 yeeKholeji ezincinci eziPhambili eMidwest